Posted by ODF on June 14, 2013 · Leave a Comment
Raadiyoo Bilisummaa Oromoo (RBO) jedhamee kan moggaafame Raadiyoon Adda Dimokiratawaa Oromoo harra Caamsaa 15 bara 2013 irraa jalqabee qilleensarra ooluuf jira.
Raadiyoon Bilisummaa Oromoo(RBO)n Adda Demokiratawaa Oromoon qophaawee ammaaf torbanitti guyyaa tokko, guyyaa Roobii sa’a tokkoof afaan Oromoon tamsaasa isaa jalqabuuf jiru RBOn, hawaasa Oromoo adunyaa guutuu keessa jiraataniif sagantaa isaa dhiheessa. Raadiyoon Bilisummaa Oromoo sagantaa isaa kana keessatti sochii Addi Demoikraatawaa Oromoo gaggeessuu fi walii gala qabsoo sabani Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyaafatu yoo ta’u, itti dabalees, aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gad fageenyaan hojjeta. Tamsaasi Raadiyoo Bilisummaa Oromoo ammaaf kara marsaa interneetii Adda Demokiraatawaa Oromoo http://oromodemocraticfront.org yaaliif jalqabee jiru kun fuula durattis dhaggeeffattoota isaa Oromiyaa fi biyya Ethiopia keessa jiraaniif afaan adda addaan kalaltiin dabarsuuf irratti hojjechaa jira. Kanaafuu dhaggeeffattootni keenya hundi yaada, qeeqaa fi gaaffii qaban hunda kara marsaa ADO oromodemocraticfront@gmail.com akka nuuf erganii fi irraa qooda fudhatan kabajaan afeerra.
Kun beeksisa gabaabaa Raadiyoo Bilisummaa Oromoo dhaahessuuf dhihaatee dha.
Dhamsa Guyyaa Gootota Oromoo ODF irraa
Waltajjiin Marii Oromoo gara Adda Dimokraatawaa Oromootti Jijjiirame
Posted by ODF on March 28, 2013 · Leave a Comment
Baatiwwan kurnan darbaniif deemsa qabsoo bilisummaa Oromookaleessaa, kan har’aa fi borii irratti hawaasa Oromoo waliin maree gaggeessaakan ture WMO Bitootessa 25-27 bara 2013tti kora gaggeeffateen gara dhaabaattijijjiiramuu isaa Ibsa Labsaa isaa keessatti addeessee jira.
Kora bu’ureessaa kana irrattis jiilotaa fi bakka bu’ootniWaltajjii Marii Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufani, bakka bu’oonnicaayaalee hawaasaa fi abbootii amantii, akkasumas beektotaa fi namootamuuxannoo qabsoo bara dheeraa qaban qabsaa’onni Oromoo irratti afeeramuun korribu’ureessaa kun sirna ho’aan gaggeeffame.